Manasongadina Sakafo, Dihy Ary Mofo Naan Ny Fankalazana Ny Diwali Lehibe Indrindra Tao Japana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Novambra 2017 5:22 GMT
Fety fankalazana ny Diwali tao Yokohama, Japana, Oktobra 2017. Pikantsary avy amin'ny fantsona YouTube deharu monkiye .
Iray amin'ireo fetibe lehibe indrindra arahin'ny Indiana any am-pielezana isan-taona any amin'ireo firenena manerana izao tontolo izao ny Diwali, izay matetika antsoina hoe ” Fetiben'ny Jiro Haindò “, ary tsy nisy hafa tamin'izany ny tao Japana .
Raha nanomboka ny 19 Oktobra ny Diwali taona 2017, olona miisa 200.000 teo ho eo, ny ankamaroany Japoney, no notombantombanana fa nanatrika ny hetsika ara-kolontsaina Diwali izay atao mandritra ny roa andro isan-taona tao an-tanàndehiben'i Yokohama tamin'ny 14 sy 15 Oktobra, ka nahatonga izany ho iray amin'ireo fetibe lehibe indrindra mifandray amin'i India tao Japana. Natao teo akaikin'ny Zaridaina Yamashita ny fetibe, iray amin'ireo zaridaina fanta-daza indrindra ao Yokohama, eo amoron-dranomasina akaikin'ny Chinatown manan-tantara.
[…] Toy ny fety O-shogatsu Japoney [fetin'ny Taombaovao] ny fetibe “Diwali”. Mazava ho azy fa misy ny fandrosoana sakafo indiana, ary trano heva maro ao amin'ny hetsika no ahitana izany .
Nitombo 28.000 teo fara fahakeliny tao anatin'ny roapolo taona farany ny isan'ny Indiana monina any Japana noho ny firoboroboan'ny varotra, ny fotodrafitrasa fampandrosoana, ny fifamatorana ara-teknolojia sy ara-piarovana.
Manana ny lazany ara-kolontsaina marobe amin'ireo tanàndehibe rehetra ao Japana i Yokohama, ilay tanàndehibe lehibe indrindra faharoa ao Japana aorian'i Tokyo. Nahazo ny fanombohana ho iray tamin'ireo seranan-tsambo Japoney voalohany ho an'ireo vahiny ny tanàndehibe rehefa namarana ny vanim-potoana lavan'ny fitokana-monina ny firenena tamin'ny taona 1854. Nanomboka teo dia lasa fonenan'ny mpifindra monina marobe izy indrindra fa ho an'ireo olona avy any Shina.
Na dia izany aza, tsy mbola mahazo laka amin'ny fisainam-pirenena aloha ny Indiana ao Japana, ka mitarika mankany amin'ny fahatalanjonana sy ny fahalianana izany. Niresaka Diwali ilay mpisera Twitter Mulboyne, izay mitantara ny sasany amin'ireo lafiny mahaliana kokoa amin'ny fiainana andavanandron'ny Japoney :
Mety tsy hahita ireo sakafo miompana amin'ny Diwali loatra ianao any amin'ny fivarotan-dehibe saingy nisy fetibe tao Yokohama tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo.
Dihy Bollywood marobe.
Nanamarika i Mulboyne fa, mampihomehy, niavaka tamin'ny – inona koa ? ny Diwali tao Japana ? –ny biby famantarana (mascotte) mahafatifaty, izay natao toy ny endrika mofo ‘naan’ tamin'ity hetsika ity:
Ilay biby famantarana Nan-chan no tena nankafiziko indrindra.
Nanamarika i Mulboyne fa efa nandritra ny taona vitsivitsy no nisy ny Nan-chan ary efa nahamarika izany ireo mpisera Twitter hafa:
Sarotra ny tsy hijery ireo sary hafa.
Nahasarika olona maro ny fankalazana Diwali ary nisongadina ny roa andro nisian'ny fampisehoana dihy sy ny hetsika ara-kolotsaina hafa.
Fandaharam-potoana/Dihy Bollywood: Sanrin Kanon sy ireo mpanakanto hafa. Tratry ny fety Diwali
Nisy ny lanonana iray namaranana ny fetibe tamin'ny andro faharoa sady farany tamin'ny Diwali tao Yokohama izay nanamarika ihany koa ny fanombohan'ny andro fety any India.
Fandaharam-potoana / diam-bavaka Diwali. Mitondra [ireo labozia], nifarana ny hetsika Diwali_tao_Yokohama_2017. Tao anatin'ny roa andro,_lasa_India_i_Yokohama. Nankafy izany ve ianao? Manomboka rahampitso ao India ny Diwali . #TratrynyFetyDiwali.
Tratry ny fety Diwali.
Azo jerena ao amin'ny kaonty Twitter ofisialy Diwali Yokohama ny sary maromaron'ny fetibe.